:Bọchị: Jenụwarị 3, 2020
Germany na-eduga Ikike na Mbupu Ọrụ
Na njem nkwanye ùgwù; Anyị na-ebugharị njem, mbubata ma ọ bụ mbupụ ọrụ ụgbọ njem anyị na Germany site n'ụzọ kachasị mma na elekere. Ndị ọrụ anyị bụ ndị ọkachamara na ngalaba a ma nwee ọzụzụ dị mkpa [More ...]
Mkpebi nke langbọ njem ọha nke Alanya
Mkpebi na-atọ ụtọ na Transportgbọ njem Ọha Alanya: Antalya Metropolitan Obodo edozila nsogbu njem njem n'okporo ụzọ Kargicak-Mahmutlar-Alanya ebe ụmụ amaala echewo ihe ngwọta maka afọ. Na mgbakwunye nke ụgbọ ala 26 na Alanya Private Public Buses 6 [More ...]
Ationgbọ njem na-amụmụ ọnụ ọchị na Denizli
Enigbọ njem Denizli Obodo Ukwu Inc. na-aga n'ihu na mmemme ọzụzụ ya maka ndị ọrụ ya maka njem dị mma, nke nchekwa na nke enyi. Denizli Obodo ukwu, na nkuzi ọzụzụ nkuzi [More ...]
Nhichacha nhicha na Marmaray Setịla Ihe Nlere nke Tender
Iji hichaa mbara ala nke Marmaray train setịpụrụ nke ndị na-ese ihe na-arụ ọrụ n'okpuru Marmaray Vehicle Maori Service Directorate, TCDD Taşımacılık A.Ş. Marmaray Octo Direction [More ...]
ArinIn logistics in Azerbaijan Transportation
A na-ebugara ndị na-ebu mmanụ n'okporo ụzọ na mba ndị na-ejikọghị n'oké osimiri. Ngwa agha na oke ahia na obodo niile dị na Europe na Eshia dị na mba anyị ma ọ bụ na-enweghị njikọ osimiri [More ...]
Aro nke OSD ịdọ aka na ntị
Onye isi oche nke Ugbo ala (OSD) Onye isi oche nke Board Haydar Yenigün, mechiri site na njedebe nke afọ a wee mara n'ihu ọha dị ka ihe na-akpali akpali "Mmemme hgbọala Agụba Agadi". Mmemme ahụ na-arụ ọrụ [More ...]
General Directorate of Land Registry na Cadastre ka ndi nkwekọrịta
General Directorate of Reg Registry na Cadastre mara ọkwa na a ga-ewe ndị ọrụ 657 dị ka Iwu Iwu 125 dị na ndị ọrụ obodo ga-esi rụọ ọrụ na ngalaba ọrụ mpaghara. A ga-ahọpụta ndị ga-eme ntuli aka dị ka isi KPSS (B) na [More ...]
Nnwale ụgbọ ala Imamoğlu nke ụgbọ ala nke abụọ: 'Ihe Ngwọta mbụ bụ Metro'
Onye isi oche İBB Ekrem İmamoğlu, nke ugboro abụọ ịgụnye ndị njem ụgbọ mmiri BRT, nyochara ụgbọ ọhụrụ ahụ. TUYAP ikpeazụ akwụsị, Yenamosna'ya İmamoğlu na-eme njem n'ụgbọ ule ahụ, ajụjụ ndị odeakụkọ na-aga [More ...]
Ndewo nụ Afọ Ọhụrụ
TCDD General Manager Ali İhsan Uygun dere isiokwu nke Merhaba Ndewo na New Afọ Ra na ebipụtara na mbipụta Jenụwarị 2020 nke akwụkwọ akụkọ Raillife. Nke a bụ edemede nke TCDD GENERAL MANAGER UYGUN Afọ Ọhụrụ, ndị bịara ọhụrụ [More ...]
Ọwa 2020 ga-abụ Afọ nke Istanbul
Mehmet Cahit Turhan, Mịnịsta nke Transportgbọ njem na akụrụngwa, bipụtara otu isiokwu akpọrọ “Afọ 2020 ga-abụ Afọ Channel Istanbul Kanal n'ọnwa Jenụwarị nke Raillife. Nkeji edemede nke Minista Turhan dere [More ...]
Nchọpụta Crazy sitere na Ndị Injinia Na-ahụ Maka Gburugburu Ebe Obibi na Canal Istanbul
Ntughari nyocha nke ndi injinia di elu gburugburu kwalitere na EIA Report of Kanal Istanbul, nke mepụtara arụmụka ọha na eze, kpughere ọrụ ndị a ga-arụ n'usoro oru ahụ. Site na ndị injinia gburugburu nke ọdụ ụgbọelu Istanbul [More ...]
TMMOB Channel gbara akwụkwọ maka Istanbul
Na ụbọchị abụọ nke ọnwa Jenụwarị 2, TMMOB nyefere akwụkwọ Kanal Istanbul project na Profaili Directorate of Environment na Urban Plan ka a ga-ebugara ya na General Directorate nke Nnyocha Mmetụta Gburugburu Ebe Obibi, Inye ikike na Nnyocha. [More ...]
Faruk Kir, Onye isi oche nke Sakarya Esraf Platform, kwuru na ha kwenyere na Obodo ukwu nke Obodo Nostalgic Tram Project ga-eweta obodo ahụ. Na Mọnde, onye isi obodo Ekrem Yüce mere nzukọ ndị nta akụkọ banyere ọrụ ụgbọ ala ahụ. [More ...]
Mbelata onyinye ego mmefu TUDEMSAS 2020
Abdullah Peker, Onye isi oche nke Njikọ nke Ọgbọ na Ndị Ọrụ Ọgbọ okporo ígwè, kwuru na njikọta nke TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ na TÜVASAŞ belatara ma mechie ụlọ ọrụ atọ. Peker kwuru na TÜDEMSAŞ bụ uru Sivas. [More ...]